Liberia - BBC News Somali
Wasiir xarig ku muteystay ereya anshaxa ka baxsan oo uu adeegsaday
Baarlamaanka dalka Liberia oo saacado ka dooday go'aanka xarigga wasiirka
Abaalmarinta Wenger iyo Muranka Liberia
Madaxweynaha Liberia George Weah ayaa sheegay inuu abaalmarin uu guddoonsiinayo macallinkiisa hore ee Arsene Wenger
Dagaal ooge 'Jungle Jabbah' oo lagu xukumay 30 sano oo xarig ah
Sirleaf oo heshay abaalmarin $5 milyan doolar ah
Qodob kale oo ku saabsan in shisheeyaha aysan wax ganacsi ku lahaan karin Liberia, ayuu sheegay in isagana meesha laga saarayo si loosoo jiito maalgashi.
George Weah oo loo dhaarinaayo madaxtinimada dalka Liberia
Laacibkii hore ee kubadda cagta George Weah ayaa maanta loo dhaarinayaa xilka madaxtinimada ee dalka Liberia kadib markii uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaas.
22 Jannaayo 2018
Madaxweynaha Liberia oo laga eryey xisbigeeda
Madaxweynaha xilka ka degaysa ee Liberia ayaa laga eryey xisbigeedi ay ka tirsanayd, ayadoo lagu eedeeyey inay ku guuldarraysatay inay taageerto in murashaxa xisbiga uu guulaysto. Ellen Johnson Sirleaf waxaa lagu eedeeyey inay dadka ku dhiirri galinaysay inay ka codeeyaan ku xigeenkeedii.
14 Jannaayo 2018
Xidiggii hore ee kubadda cagta George Weah ayaa iskudaygii labaad waxa uu ku noqday madaxweynaha Liberia.
Wax ka ogow hannaanka loo maro xil ka qaadista madaxweynaha Soomaaliya
Sidee dareemi lahayd haddii aad goolhaye ka noqoto Soomaaliya?
Khadiija Kensig : Khaashuqji isaga oo aan i macsalaameyn ayay iga dileen